မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: jedi master တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး lucas Animaiton Singapore မှာ အလုပ်လုပ်မလား..
jedi master တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး lucas Animaiton Singapore မှာ အလုပ်လုပ်မလား..
ဒီမနက်မှ ဖတ်မိတာလေး အားလုံးသိစေချင်လို့ ဝေမျှရုံသက်သက်ပါ။မူရင်းပို့စ်က ဒီမှာပါ။ Myanmar နိုင်ငံနဲ့ အနီးဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ Singapore မှာ Lucas film / Industrial Light and Magic ကလာပြီးတော့ branch တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ လုပ်တာတော့သိပ်မကြာသေးပါဘူး ဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာဖွင့်တာပါ။အဲဒီမှာ internship program တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ program က ဒီ trainee တွေကို jedi master တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး lucas Animaiton Singapore မှာ အလုပ်လုပ် နိုင်အောင် train ပေးမှာပါ။Hollywood ထိသွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။star wars fans တွေ special effect wizard ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေ Lucas film/ Industrial light and magic လိုနေရာမျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ လိုအပ်ချက်တွေ သေခြာဖတ်ပြီး ကြိုးစားကြည့်ကြပါလား။ မြန်မာတွေက မညံ့ကြပါဘူး။၆လ program လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီ program ကို apply လုပ်နိုင် ဘို့က အရွေးခံရတာ မရတာနောက်ထား Singapore မှာ ရှိနေတဲ့သူဖြစ်ရမှာပါ။ အလုပ်နဲ့သော် ဖြစ်စေ၊ မှီခိုသော်ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသားသော်ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ရပါမယ်။ visit နဲ့လာပြီး apply လုပ်လို့မရပါဘူး။ကျတော်သိရသလောက်တော့ သူတို့က ဘာ pass မှလျောက်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလို industry ကို crazy ဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေ သွား လျှောက်သင့်ပါတယ်။ ကျတော့စိတ်ထင်တော့မြန်မာပြည်ကနေလာပြီတန်းပြီ အရွေးခံရဘို့ မလွယ်ပါဘူး။ အရန်းဝါသနာပါ ရင်တော့ နဂိုကလည်းဘာ skills မှသေခြာရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့။Singapore က Poly တို့ ITE တို့ အထူးသဖြင့် ITE လို ဟာမျိုးမှာ မိမိအတွက် အလွယ်ဆုံးလို့ဖြစ်နိုင်မဲ့ ဘာသာတစ်ခုကိုရွေးတတ်လိုက်ပါ။ gov school ကကျောင်းသားဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် Lucas Animation Singapore က internship job ကို apply လုပ်လို့ eligible ဖြစ်သွားပါပြီ။ private school ကဆိုရင်တော့ မရလောက်ပါဘူး။ပြီးရင် singapore မှာ short course တွေရှိပါတယ် animation တို့။ life drawing တို့ 3d တို့ ကို တတ်ပါ။ short course တွေက သိပ်ဈေးမကြီးပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ requirement မှာပါတဲ့ skill တွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့ သွားပြီး apply လိုက်ပါ။ခင်ဗျားတို့မှာ talent ရှိရင် ဟိုလူတွေက ရွေးပါလိမ့်မယ်။ အဓိက က ရူးသွပ်မှုပါဘဲ။hope this help to who want to join animation and special effects industry .Jedi master program home pageဘယ်လို ဟာမျိုး တွေရှိလည်းဆိုတာကို တော့ ဒီမှာကြည့်ပါ။requirement တွေကိုတော့ ဒီမှာကြည့်ပါ။သူတို့ကဒီလိုပြောပါတယ်။[ The trainees, who will be paid 'a lot better than in an industrial attachment', will learn to work in specialised fields within animation such as lighting, special effects and compositing.More than half their time will be spent inareal production environment, with the majority slated for permanent jobs should they reach expected standards.As for prospective candidates, the studio will check out not only the alumni of digital media schools, but also those who may have spent years honing their artistic skills on their home computers but have never receivedapaper qualification. ] ref: asiaone.comunder line တားထားတာက ဘာ certificate ဘာ diploma မှ မရှိတဲ့သူလဲ့ talent ရှိရင်ရွေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒီ Lucas Animation Singapore ရဲ့ managing director Mr.Christian Kubsch ကဒီလိုပြောပါတယ်။"It is about being talented, being able to show what you have done. If someone has just one piece of animation done in the past year, but with enthusiasm, passion and potential in it, that may well be good enough."try ကြည့်ကြပါလား။ animation တွေ special effect တွေလုပ်ချင်တဲ့သူတစ်ရောက်အတွက် အမြန်ဆုံး Industry ထဲကိုရောက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။P.S: All credit goes to this post original writter Marius79 Gepostet von
လူကြီးမင်း ကြည့်နေသော ဘလော့ဂ်မှာ.............
World Blog Day's Activities in MM and SG
Bird park က ပင်ဂွင်းငှက်နဲ့ ကျမ
To be careful မြန်မာ ချတ်တာ at #ygnchat
စပ်မိစပ်ရာ ဖတ်မိသော လင့်ခ်များ
jedi master တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး lucas Animaiton S...
Online Extension of Short Term Visit Pass (e-XTEND...
ဒီနှစ်အတွက် ဘလော့ဂ်ဒေး ဘယ်လိုလဲ ဘာလဲ...